Nuxurka Iyo Qisooyinka Dhabta Ah Ee Ay Ku Yimaaddeen Qaar Ka Mid Ah Heesaha Cabdiqaadir Xirsi Yamyam – Q:2aad | FooreNews
Home wararka Nuxurka Iyo Qisooyinka Dhabta Ah Ee Ay Ku Yimaaddeen Qaar Ka Mid Ah Heesaha Cabdiqaadir Xirsi Yamyam – Q:2aad
Nuxurka Iyo Qisooyinka Dhabta Ah Ee Ay Ku Yimaaddeen Qaar Ka Mid Ah Heesaha Cabdiqaadir Xirsi Yamyam – Q:2aad
Ugu horreyn inta aynaan hadalka Abwaanka soo qaadan waxa aan eegi doonaa dhawr tuduc oo ka mid ah midhaha heestan si aan isula socono oo aad u sii fahantaan heesta laga hadlayo. Heestu waa Daallo waxaana ku luuqeeyay cod layaab lehna ku qaaday Fannaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuniye oo ka mid ahaa Hobolladii Waaberi, waxaanay soo baxday sannadkii 1979-kii, laxanka layaabka lehna waxa ku ladhay Cabdikariin Faarax Qaarey (Jiir) oo ka mid ah ragga looga hadhay laxamada macaan ee heesaha Soomaalida. Heestu waxa ay odhanaysaa:
“Durdur Iyo Xareedeey,
Doog Iyo Ugbaadeey,
Dhibic Iyo Daruureey,
Ubax Daraya Muusoo,
Nuurka Isku Daray Iyo,
Dusha Roob La Dhaca Iyo,
Daa’uus La Moodyeey’
Qaybta dambe ee qisadan ayaynu dhammays tiri doonaa midhaha heesta ee bal aan hore ugu socono Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam oo ka hadlaya sida dhabta ah ee ay qisadani ku timid waxaanu yidhi: “Heestaasi waxa ay ahayd oo aan sameeyey 1979-kii oo ay soo baxday qaabka ay u soo baxday iyo ujeedadii ninyohow soomaalidu marka ay suugaanta dhex galaan ama wax dhagaystaan qofba si buu u fasirtaa amma cidbuu la jeclaadaa ama erayada gudaheeda ku jira ayuu micno kale siiyaa oo waji kale u sameeyaa. Heestan ‘DAALLO ARAGTIDEEDA’ haddii aan umadda u caddeeyo sida aan ku sameeyey ee ay ku soo baxday waxa ay ahayd Subax anigoo iska fadhiya xafiiskayga Akeedimiyada Fanka, Cilmiga iyo Suugaanta ee Muqdisho ayaa waxa ii yimid fannaankii weynaa ee aad garanaysaan waa Salaad Derbi oo heesaa ah oo Waaberi ah. Markaasuu igu yidhi: “Waar waan ku doonayay. Ninbaa halkan jooga sakaraad ah oo xanuusanaya oo naftii ka baxayso inaad iila tagto ayaan rabaa oo aannu bal xaaladdiisa wax ka ogaano oo soo eegno”. Intaa markii uu Salaad Derbi igu yidhi ayaannu isa soo raacnay nin xafiis fadhiya ayannu u nimid oo meel baabuurta laga kiraysto oo taraleejo la yidhaahdo iyo wax isugu qoofalan yihiin. Ninkii magaciisii buu I baray oo waxa la yidhaahdaa Cismaan Kulmiye Fagaas. Ninku wuu ooyayaa!. Hadba warqad buu soo qaadanayaa duuf iyo ilmo ayuu iska tirayaa. Waxa uu leeyahay tol beelayeey ee ha la ii hiiliyo. Waxaannu ku nidhi waar maxaannu kuugu hiilinaa. Waxa uu leeyahay Jacayl baa I haya. Ninku waa nin weyn oo illaa 55 illaa 60 jira oo Caruurtiisu reero leeyihiin. Laakiin isma naqaanno annagu”. Ayuu yidhi Yamyam.
Intaa kadib maxaa kala qabsaday Ninkii odayga ahaa ee Jacaylku hayay iyo Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam oo uu markaasi wehelinayay Fannaanka caanka ah ee Salaad Maxamed Derbi. Waakan Alla Ha U Naxariistee Abwaan Yamyam oo arrinkaasi innooga warramayaa: “Ninkii baannu is waraysannay. Bal sida loo hayo iyo waxan ku dhacay?. Waxa uu igu yidhi: “Gabadh baan jecelahay. Gabadha waxa la yidhaahdaa Aamina. Magaceedii kale ma garanayo. Jaamacadda Lafoole ayay dhigataa. Waannu is baranay. Laba sano illaa saddex sano ayaannu wada soconay oo haasaawuhu naga dhaxeeyey.
Previous PostImaaraadka Oo Daaha Ka Fayday Cidda Kursiga Saartay Farmaajaha Soomaaliya Kuna Sheegtay Nin Argagixiso Ah Oo Dadkiisa Oo Gaajoonaya Dillaal Lacageed Ka Raadiya Next PostQadar Oo Soomaaliya Ka Caawinaysa Sidii Ay Dagaal Ula Gali Lahayd Mashruuca Dekedda Berbera Iyo Farmaajo Oo Wiigga Dambe Tagaya Caasimada Doha